I-MINDY KALING EYAHLUKILEYO NGOKUMANGALISAYO 'IMITSHATO EMINE KUNYE NOMNGCWABO' WETRAILER - IMITSHATO EMINE KUNYE NOMNGCWABO
Iincwadi Ze-Del Rey
Imitshato emine kaMindy Kaling kunye noMngcwabo oMngcwabo osinika iRomcom iyantlukwano esiyifunayo
Xa kwabhengezwa ukuba iMindy Kaling ibhala kwaye ivelisa uthotho lokuqalisa kwakhona Imitshato emine kunye noMngcwabo , ingcinga yam yokuqala yayi, kunjalo. Emva kwayo yonke loo nto, ngubani olunge ngakumbi ukujongana nomdlalo othandwayo wase-Bhritane ka-1994 kunoyena mntu uthandwayo? Kwaye ngoku ukuba i-trailer yokuqala ifikile, kubonakala kucace ngakumbi ukuba uKaling ulunge kangakanani kwizixhobo. Emva kwayo yonke loo nto, akukho OTP yomeleleyo kuneMindy Kaling kunye nee-comedies zothando.
Ungcelele lwamanqaku afundeka ngolu hlobo:
I-avatar iindandatho zokugqibela zomoya
UMaya (uNathalie Emmanuel), umlawuli oselula wezonxibelelwano wephulo lenkundla yamatyala eNew York, ufumana isimemo somtshato kumntu afunda naye kwikholeji ngoku ohlala eLondon. Ubushiya ubomi bakhe bobungcali kunye nobuntu ngasemva, endaweni yokuya eNgilane kunye nokunxibelelana kwakhona nabahlobo bakudala kwaye aphele phakathi kweengxaki zabo. Ubudlelwane benziwe kwaye buqhekekile, amanyundululu ezopolitiko avezwa, impilo yaseLondon ikhanyisiwe, imicimbi yothando yatshiswa yaza yatshiswa, kwaye ngokuqinisekileyo kukho imitshato emine… nomngcwabo.
Enye yezona zinto zomeleleyo kwifilimu yoqobo yayiyi-chemistry kunye ne-banter phakathi kweqela labahlobo (utyikityo lomlobi-skrini uRichard Curtis). Ukujoyina amaMaya ngabahlobo beekholeji uAinsley ( Iprojekthi yeMindy 'URebecca Rittenhouse), uCraig ( Ungoyena Mbi kakhulu 'NguBrandon Mychal Smith), kunye noDuffy ( Iqela lokukhangela 'NguJohn Reynolds), kunye noKash ( Ihlobo laseIndiya 'UNikesh Patel), ummi mhle waseMaya uqaqamba kwisikhululo seenqwelomoya.
Itreyila ithembisa uhlaziyo oluninzi olufunekayo ebalini, kubandakanya isamente eyahlukeneyo ezaliswe ngabantu bebala. Ngelixa ifilimu kaMike Newell yayiyenye yeeromcom zokuqala ukubonisa isibini esivulekileyo sesini kunye nomntu ongevayo, yayinjalo (njengoko zazinjalo iifilimu ze-90s) ezimhlophe ngokungaboni.
UKali utshilo kudliwanondlebe no Ukuzonwabisa ngeveki , Bendifuna ukuthatha imixholo kunye nomxholo webhanyabhanya kwaye ndiyisebenzise ngamehlo am endifuna ukukubona endingekakuboni. Ndiyazi ukuba zininzi intombazana entle, ehlekisayo, nenomdla kumantombazana ase-Afrika-aseMelika kunye nabaninzi abahle, abahlekisayo baseBritane-Pakistani nabaseBritish-Indian kwaye andiqondi ukuba ukhona umntu onokuzidibanisa ukuba andizukuyenza.
U-Emmanuel waphindaphinda uluvo lukaKaling, esithi ngefilimu ka-1994, Masinyaniseke, Imitshato emine yenye yezona bhanya-bhanya zimhlophe okokoko… Kwakungekho baninzi kuthi ababonayo kwiscreen kwiimuvi zelo xesha. Icwangciswe njengesahluko sokuqala kuthotho lwe-anthology, I-FWAAF Ithembisa uburharha obufanayo kunye nokuthandana komanduleli, oza kubona ukuba abalingisi baya kwimitshato emine kunye nomngcwabo (ngokwendalo) kwikhosi ye-10-episode.
Njengoko iinkonzo zokusasaza ziqhubeka nokufaka ibango labo kuhlobo lokuhlekisa lothando, Imitshato emine kunye noMngcwabo kujongeka njengokongezwa okwamkelekileyo ekuvuseleleni i-romcom yangoku sonke esikonwabelayo.
Iziqendu ezine zokuqala zenkulumbuso yeHulu ngoJulayi 31.
(umfanekiso: UJay Maidment / Hulu)
umphathi weplanethi kunye nebhasi yesikolo somlingo
Udkt Inkosazana Ngokubanzi Ufunde I-Organa
I-tulsi gabbard yesayensi yesazisi
I-wynonna earp isizini 1 isiqendu 4
UJohn connor kunye noKyle Reese
iqhawe lam lemfundo lizama ukulinganisa ilizwi
sesiphi isilwanyana esinee-vagina ezintathu